MenuMM Travel Blog	-GLOBAL BLOG ENGLISH Top Destinations	-Yangon -Bagan -Mandalay Book Your Hotel in Myanmar!
MM Travel Blog
Book Your Hotel in Myanmar!
Soe Darli | October 2, 2017
ညောင်ရွှေမြို့ မှာရှိတဲ့အင်းလေးဟာ မြို့ကြီးတွေလိုမဟုတ်ပေမဲ့ tourist attraction နေရာတစ်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်စားသောက်ဆိုင်ပေါများတဲ့ နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ အင်းလေးမှာရောက်ရင် ဝင်စားကြည့်သင့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ချို့အကြောင်းပြောပြပါမယ်။ လင်းထက်မြန်မာစားသောက်ဆိုင် ဒီဆိုင်ကတော့ဘယ်ရောက်ရောက် မြန်မာထင်းနဲ့ဟင်းကိုမှ စားချင်တဲ့လူတွေသွားသင့်တဲ့ဆိုင်ပါ။ ဈေးချိုပြီး အလွန်အရသာရှိတဲ့ဆိုင်ပါပဲ။ဆိုင်ကတော့ ရုံကြီးလမ်းထောင့်က ဈေးမှာရှိပါတယ်။...
Soe Darli | September 22, 2017
စီးပွားရေးနဲ့ဘာသာရေးအချက်အချာမြို့ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြို့ဟာ မငြင်းနိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ မန္တလေးဟာ တော် ဝင်နန်းတော်ကိုဝန်းရံထားပြီး စက်ဘီးနဲ့မော်တော်ဆိုက်ကယ်များသွားရာ လမ်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေကာ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုး ထွန်းကားတာကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်။ မန္တလေးကို ဘာကြောင့်သွားလည်သင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းငါးချက်ကိုပြောပြပါမယ်။ ၁။ ဘုရားများ
Soe Darli | September 20, 2017
ရန်ကုန်မြို့ကို ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသောမြို့ထက် ခေတ်မီသောမြို့ပြတစ်ခုအဖြစ်သာ လူတွေက မှတ်ယူထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးအကျဆုံးနဲ့ တန်ခိုးအကြီးဆုံး ဘုရားစေတီတွေ တည်ရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုရန်ကုန်မြို့ ကထင်ရှားတဲ့ဘုရားတွေ အကြောင်းပြောပြပါမယ်။
Soe Darli | September 15, 2017
ခရီးသွားတဲ့အခါ လမ်းဘေးအစားအစာတွေလိုက်စားတာက မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာတွေထဲမှာပါပါတယ်။ မြို့တစ်မြို့ခြင်းစီမှာ မတူညီတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတွေတဲ့အပြင် တူရင်တောင်မှ မြို့ပေါ်မူတည်ပြီးအရသာတွေ ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်လိုမျိုးပဲ မန္တလေးဟာလည်း အစားအသောက်ကောင်းတွေရှိလို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ မန်းမြေမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးအစားအစာတစ်ချို့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
Soe Darli | September 14, 2017
ပုဂံကို သွားလည်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား? ပုဂံကိုသွားမယ်ဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်လိုက်ရှာရင်း အချိန်မကုန်စေဖို့ စားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်အချို့ကို သိထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပုဂံကဆိုင်ကောင်းလေးတွေ အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။
Soe Darli | September 7, 2017
တမူထူးခြားတဲ့ ဖောင်တော်ဦး ဘုရားပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲရအောင်
စက်တင်ဘာလရောက်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပွဲတော်ရာသီဟာစတင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပျော်ပွဲရွင်ပွဲတွေထဲမှ အထူးခြားဆုံးတစ်ခုကတော့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Soe Darli | September 5, 2017
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေး မြို့ကို သွားလည်ရင်သမိုင်းအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် မြန်မာန်ိင်ငံရဲ့အလှဆုံးနေရာတွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လဲ ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဝါဿနာပါတဲ့လူတွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့နေရာတွေကို ပြောပြမယ်နော်။
Soe Darli | September 1, 2017
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်မြို့ က ကိုလိုနီခေတ်ကအဆောက်အဦးတွေအများဆုံးရှိတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲအဆောက်အဦးတွေအားလုံးဟာ ရန်ကုန်မြို့အမွေအနှစ်စာရင်းထဲမှာပါပါတယ်။ ရန်ကုန်အမွေအနှစ်စာရင်းမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေနဲ့ ကိုလိုနီခေတ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အဆောက်အဦး ၁၈၈ ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အဲ့အဆောက်အဦးတွေအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။ Saint...
Soe Darli | August 22, 2017
ပုဂံမှ လှပသော လက်မှုပစ္စည်းများ
ရှေးဟောင်း မြို့တော်ပုဂံမှ ဘုရားစေတီပုထိုးတို့ထက်ပို၍မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။ ပုဂံဟာလက်မှုပစ္စည်းများဖြင့်လည်း ကျော်ကြားသောမြို့ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂံမှ လှပတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေအ ကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ယွန်းထည် ယွန်းထည်တွေဟာ ပုဂံရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးလက်မှုပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားတွေမှာ ယွန်းထည်အ ရောင်းဆိုင်တွေကိုတွေ့နိုင်သလို ပုဂံမြို့ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာလည်း ယွန်းထည်အလုပ်ရုံတွေကိုတွေ့နိုင် ပါတယ်။ ယွန်းထည်တွေကို ...
Soe Darli | August 21, 2017
ရန်ကုန်မြို့ဟာပျော်ရွှင်စရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစား အသောက်အမျိုးမျိုးရနိ်ုင် တာဟာလည်းပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာစားသောက်ဆိုင်တချို့အ ကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ ORNG Kitchen ORNG Kitchen ကတော့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းမှာရှိတဲ့ ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာ Menu နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့အတွက်အလွန်ချီးကျူးခံရပြီး...
4 Instagram Accounts Depicting Yangon City’s Splendor!
Where And When To Go: Yangon’s Current Popular Hotels!
Top Places to eat in Inle Lake
Customer Relationship Management: Proficient Business Systems & Effective Solutions
How Paid Advertising Can Help in Promoting Your Hotel
Restaurants Yangon ဘုရား Guest house Mandalay အငျးအိုငျ Bagan Mountains Hill တောင်ကုန်း Business အာရှ Beaches Festivals ကမျးခွေ Museum ပန်းခြံ Pyay Park ဘုရားကျောင်း Transport Kalaw Shopping ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် Family Weekend Shwedagon Pagoda Airport Chaung Thar Hpa-An